Akanakisa Nhema Chishanu kupera kwevhiki muhunyanzvi | Linux Vakapindwa muropa
Akanakisa Nhema Chishanu kupera kwevhiki
Chishanu chakasimba ichi Nhema Chishanu, pati haisati yapera. Ino vhiki ino hangover yezvipo inoenderera. Tora mukana wenyaya dzese nekupihwa izvo zvasara zvevakasara kutenga izvo zvawakakanganwa musi weChishanu, kana izvo zvausingakwanise kutenga.
Iyi hangover haina kufanana nedzimwe, iwe unongozvidemba kuti hauna kurarama zvakanyanya, kutemwa nemusoro uye kurwadziwa muhomwe kuchauya mumashure, kana madhiri acho asisipo. Rangarira kuti iwe uri kutarisana nemukana unoshamisa wekutenga zvese zvigadzirwa zvaunoda, pamwe nekufambisira mberi kutengwa kwezvipo zveKisimusi ino.
Yakakurudzirwa madhiri evhiki
Heano ma zvipo zvakanakisa zvevhiki rino, kudziya kuCyber ​​Muvhuro ...
ASUS VG27BQ TUF Kutamba: isu takatanga hangover vhiki yeChishanu Chishanu nemonitor a 17% kuderedzwa saka unochengetedza zvinopfuura ma- € 70 pakutenga kwako. Iyi ndiyo modhi yakanyatsogadzirirwa kutamba. Iine 27, FullHD (1920 × 1080 px), 1ms, 165Hz, GameFast Input tekinoroji, ELMBS, 300 cd / m2, uye HDMI kana DisplayPort yekubatanidza. Uye zvakare, inoenderana neese maviri AMD FreeSync tekinoroji uye NVIDIA G-Sync. An yakanaka yekutarisa kunakidzwa neyako aunofarira emavhidhiyo mitambo neSteam uye yako yaunofarira GNU / Linux distro. Ndiani anoti haugone kutamba mitambo paLinux?
JOYACCESS Kit: tora kit iyi ku 24% zvishoma. Iyo compact isina waya keyboard uye mbeva. Vandudza zvigadzirwa zvako zvekuisa kana izvo zvatova zvakasakara, kana makiyi haapindure sezvaanofanirwa nekuda kwenguva yekushandisa. Iyo keyboard ndeyeSpanish, QWERTY mhando uye ine manhamba keyboard. Uye zvakare, zvese zvigadzirwa zviri ergonomic uye zvinobatana kuburikidza neasina waya tekinoroji kune komputa yako. Inoenderana neWindows, Linux uye macOS.
Western Dhijitari Bhuku Rangu NAS: chengetedza zvinodarika € 177 ne 24% kuderedzwa. Iyo yekunze hard drive ine hukuru hukuru hwe28TB (28000GB) kuti ugone kugadzira otomatiki backups uye uve neyako data rako rakachengeteka. Ivo akagadzirirwa RAID, uye yavo RAID-0 kumisikidza yakagadzirira kushandisa, saka iwe uchave uine redundancy kuitira kuti hapana data rinorasika kunyangwe kana rakaomarara dhiraivha ikakundikana. Iyo inosangana kuburikidza neUSB 3.1 Gen 1 chiteshi, yekumhanyisa kwazvo kumhanyisa kumhanya, kunyange ichienderana ne USB 3.0 chiteshi. Inosanganisira maviri USB 3.0 madoko ekubatanidza chero chaunoda sehubhu, uye Acronis Yechokwadi Image Software.
ASUS TUF Kubheja A15 FA506II-BQ029: Kana iwe uchida laptop yekutamba, neiyi Black Chishanu yekupa iwe unogona kuitora ye 20% zvishoma. Laptop iyi ine 15.6 - FullHD skrini yekutarisa mitambo yako ine hukuru hwemufananidzo. Uye zvakare, ine Hardware ine simba, ine AMD Ryzen 7 4800H processor, 16GB yeDDR4 RAM, 1TB yeSSD, 1650GB GDDR4 NVIDIA GeForce GTX 6 Ti yakatsaurirwa kadhi yemifananidzo, RGB QWERTY keyboard muSpanish uye, kupfuura zvese, kwete Iwe unobhadhara Microsoft Windows rezinesi, sezvo inouya isina anoshanda system kuti ugone kusarudza yaunoda kuisa. Nenzira, iri zvakare MIL-STD-810G yemauto inosimbiswa simba rakanyanya uye kusimba… Ehe, ndine chokwadi kuti uchaisa Linux distro;)
Samsung Galaxy Watch: Uye kana ndikakuudza kuti iwe unogona kutenga iyi smartwatch kuchengetedza € 145, unozvitenda here? Zvakanaka, paChishanu Chishanu zvinogoneka, nekuda kwe 44% dhisikaundi. Iyi Samsung smartwatch ine dhizaini dhizaini, inoteedzera wachi yakajairwa, asi maonekero ayo haafanire kukunyengera. Kune hunyanzvi hwakawanda muiyi kifaa inopfeka, senge yayo 1.3 ″ skrini, ine simba ARM-based processor, 4GB yemukati ndangariro, GPS / Glonass yenzvimbo, yakavakirwa-mukati mutauri uye maikorofoni yekutaurirana pasina maoko, uye kuramba kwemvura. Chipo chakanaka chemazuva aya.
LG 55NANO806NA: chengetedza € 129 neiyi. Iyo smart TV ine 4 ″ 55K NanoCell, ine Artificial Intelligence / Kudzidza Kwakadzika, WebOS 5.0 inoshanda system (Linux kernel) ine huwandu hwemaapplication muchitoro chayo kurodha pasi, QuadCore processor, Local Dimming, HDR 10 Pro, Ultra Yakakomberedza ruzha, uye simba rekuita simba kirasi A.
Taurus MyCook Kubata Unlimited Edition: ino processor yekudya inodhura € 890, asi ikozvino unogona kuitora ye € 499 Kutenda kune iyo 44% dhisikaundi paChishanu Chishanu, ndiko kuti, iwe unochengetedza zvinodarika € 391 izvozvi. Iyi kicheni robhoti ine WiFi yekubatanidza yeinotungamirwa online mapikicha (iyo zvakare inobvumidza manyore modhi kuchinjisa ako wega mapikicha), 1600W yesimba kune yayo mota uye yekudziya sisitimu, kara yekubata skrini, kugona mugirazi rayo kwe2 litita (yakanakira 3/4 vanhu), kubva pa40º kusvika ku140º ye tembiricha, multifunction (kubika, kupisa, kutsva, kukuya, mincing, kurema, kuvirisa, kurova, kukwidza,…), 10 kumhanya, timer, ine inopfuura zviuru gumi zvinonaka mabikirwo uye munyu wemarudzi ese, 10.000-nhanho steamer yekupisa uye pasta tswanda.
iRobot Braava Jet M6134: tora uwane a 11% zvishoma. Iyo irobhoti kubva kune inozivikanwa iRobot brand, senge iyo Roomba, ine mop mop basa uye yekumanikidza sprayer, pamwe nekugona kwemop yakaoma. Iine yepamusoro mepu uye yekufambisa system. Kunyangwe iwe uri munzvimbo yakakura kwazvo, unogona kudzokera kunzvimbo yekuchaja wega, recharge bhatiri rako, uye udzokere kunoshanda wega, uchitora kwawakasiya. Zvese zvinogadziriswa kubva kune yako nharembozha. Rutsva rweiri robhoti richienzaniswa nedzimwe ndedzekuti jeti yakasaswa pasi pekumanikidzwa, iyo inokwanisa kudzora tsvina inonamira uye kubvisa iwo maronda anoramba aripo.
ASUS RT-AX92U: Kana iwe uchitsvaga iyo router yekutamba, kana kuti uwane iyo yepamusoro kuita mune yako yakabatana imba, tenga iyi ASUS ne 34% kuderedzwa kuponesa. Imwe AX6 WiFi 6100 router, DualBand, 4 Gigabit LAN ports (RJ-45), OFDMA, MU-MIMO, Triple VLAN, Access Point Mode, ASUS AiProtection Pro neTrend Micro tekinoroji, Adaptive QoS, ASUS Ai Mesh inotsigira meshes wireless, kumhanya chaiko kunoshamisa, uye mana ma antennas ekunze aunogona kutungamira nenzira yaunoda kuitira kuti kufukidza kusvike kunzvimbo dzese Iwe unotoziva kuti kana kanyanga kakamira zvichange zviri nani kugovera masaisai chakatenderedza mukati mekamuri, nepo kana iwe ukaisa iyo antenna yakatwasuka, unogona kuwedzera kufukidzwa kweWiFi kumusoro uye pasi (kwepasi pasi kana epamusoro pasi).
Samsung Galaxy Buds +: ponesa 16% vhiki ino mune aya mahedhifoni asina waya. Iine mhando uye compact dhizaini, pamwe neyakajeka. Iine yakajeka uye inotsanangurwa yakajeka mhando yekutenda kune yayo AKG tekinoroji, ruzha rwayo rwekudzima sisitimu ine ambient ruzha mode (Ambient Sound System) kuteerera kune zvakakukomberedza pese paunoda, bhatiri rine anosvika maawa makumi maviri nemaviri ekuzvimiririra, isina waya kuchaja kubva kwaro kesi , uye kuenderana neApple. Inoshandisa tekinoroji yeBluetooth yekubatanidza, uye inosanganisira maikorofoni yekutaurirana pasina maoko.
DJI Mavic Mini Combo: uye pakupedzisira ,joinha iyo 15% dhisikaundi yemupiro uyu uye chengetedza € 75. Iyi Drone ndeyekupedzisira, iine lithiamu bhatiri inokwanisa kusvika makumi matatu emaminitsi ekubhururuka, ine nhambwe yekufambisa inosvika kumakiromita maviri, 30-axis gimbal yekusimba kukuru kwechigadzirwa chekufungidzira, 2MP kamera yemifananidzo uye HD vhidhiyo, uye Fly App inowirirana Android uye iOS. Inosanganisirwa mupakeji iiyo DJI Drone, 3 mabhatiri ekubhururuka, remote control, 12 spare propellers, kamera inodzivirira, 3 microUSB tambo, USB-C mhando mutyairi wekuchaja tambo uye yakanamatira tsvimbo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Akanakisa Nhema Chishanu kupera kwevhiki
Plasma Bigscreen: KDE TV software inoenderera, neyechipiri beta uye mufananidzo weRaspberry Pi 4